Sheikh Sharif iyo Cabdiweli oo si gooni gooni ah dalka dib ugu soo noqdey olole xooganna bilaabey – idalenews.com
Sheikh Sharif iyo Cabdiweli oo si gooni gooni ah dalka dib ugu soo noqdey olole xooganna bilaabey
Sheikh Sharif Sheikh Axmed, Madaxweynihii Waqtigiisu dhamaadey iyo Ra’iisul Wasaarihiisa Abdiweli ayaa si gooni gooni ah dalka dib uga soo laabtey, ka dib markii ay magaalada Addis Ababa uga soo qeyb galeen aas qaran oo loo sameeyey Ra’iisul Wasaarihii Itobiya oo dhowaan geeriyoodey.
Shariif Shariif oo ay si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ka qeyb ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada, saraakiil, xildhibaano, ardeyda dugsiga magaalada qaarkood iyo maamulka gobalka banaadir. Isagoo saxaafada u waramayey ayaa u mahadceliyey dadkii ka qeyb ahaa soo dhaweyntiisa.
Madaxweynaha oo saxaafadda shir jaraa’id ugu qabtay madaxtooyada ayaa sheegay in uu la kulmay R/wasaaraha Dalka Ethiopia Xeyle Maryam oo ay isku raaceen in xiriirka labada dowladood uu sii socdo, ayadoo la adkeynayo iskaashiga lagu nabadeeyo geeska Afrika.
“Waxaan is aragnay R/wasaaraha KMG ah markii horena ahaa R/wasaare ku xigeenka Ethiopia, waxan ka wada hadalnay marxaladda kala guurka ah ee ay galayaan iyo marxaladda kala guurka ah ee Soomaaliya halka ay mareyso, waxaana isla garanay in siyaasaddii hore ee lagu socday la sii xoojiyo” ayuu yiri madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in si guul ah ay ku dhammaato doorashada madaxweynaha dalka, si waddanku uu u helo dowlad rasmi ah oo ka saarta dhibaatada muddada dheer ka jirtay, soona celisa sumcaddii daalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaare Abdiweli ayaa garoonka Aadan Cade waxaa ku soo dhoweeyey golihiisa wasiirada, saraakiil, iyo xildhibaano ka tirsan barlamaanka cusub/
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli ayaa warbaahinta kula hadlay, Isagoona ka warbixiyay Safarkiisii Ethiopia.
“Marka ugu horeyso waxaan aad igu faraxasanahay inaan ku soo laabto dalka, Waxaana sida aad la socotaan ka qeybgalney aaskii qaran ee Ra’iisul Wasaarihii hore Ethiopia Meles Zanawi”.
Wuxuuna intaasi ku daray in wadanka Ethiopia ay tahay dowladda aan saaxiibnahay oo aan deris nahay oo aan aad u wada shaqeyno islamarkaana nagala shaqeeya xasilinta iyo xoreynta dalka Soomaaliya.
Ugu dameyntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay muhiim u tahay gedi socodka nabadda ee Soomaaliya islamarkaana tilmaamay inta ay ku sugnaayeen Adis Ababa ay kulamo la qaateen mas’uul sare oo ka kala socota Caalamka kana wada hadleen arrimaha Soomaaliya iyo meesha ay mareyso gedi socodka nabadda.
Qabashada Araajida Jagada Madaxweynaha oo maanta bilaabatey
Musharaxiinta ugu horeeya ee la filaayo iney ku guuleystaan Jagada Madaxtinimada Dalka Somalia